Izindleko uphethiloli e abashayeli ezweni lethu abajabuli. Futhi abanikazi izimoto kwezohwebo kanye zonke kungaba ukulahlekelwa uma ran "iNsephe" uphethiloli. Kodwa namuhla, igesi ingasetshenziswa uphethiloli. Lokhu kuzokwenza kakhulu ukulondoloza isabelomali futhi kunciphise izindleko zokuphatha inkampani. Ukufakwa imishini igesi "iNsephe" namuhla kuzuzisa kakhulu, ngoba mileage zabo nsuku zonke ingafinyelela km kuka-500.
Kodwa udinga ukufaka HBO, ucabangisise ngezinto. "INsephe" - kuyinto ezokuthutha commercial ke udinga ukwazi kahle lapho nembuyiselo ekutshaleni imali. Ukuze ubale, kukhona yokubala ekhethekile. Kodwa ungenza konke ngesandla.
Ngokwesibonelo, setha igesi Imishini ku "iNsephe" Digitronic oluqanjwe, isibonelo, yakhelwe i-methane.
Ukufakwa umsebenzi injini uphethiloli injected izobiza ruble 50,000. Car mileage ngelanga kuyinto km okungenani 400. Fuel ukusetshenziswa kuyinto 18 amalitha nophethiloli. Izindleko 1 ilitha uphethiloli ezweni lakithi ruble mayelana 35. 1 m3 methane kuyinto ruble 9 kuphela. Ngakho, uma imoto ngeke zihamba ngophethiloli, nge izindleko kuphela uphethiloli ukwenza ruble 2160 ngosuku. Futhi izindleko yokugcwalisa igesi uzoya iwubuphukuphuku 648 ruble. Ungagcina ruble mayelana 1,500 ngosuku. Ngokwesibonelo, setha igesi Imishini ku "iNsephe" uzokhokha kancane ngaphezu kwenyanga noma 13,000 km. Ngaphezu kwalokho ukonga kuyofika kakade isabelomali.
Izinsiza kusebenza for propane
Methane kuyazuzisa. Propane, kakhulu, kodwa kukhona abanye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ukufaka lolu methane ishibhile, kodwa igesi abiza ruble-15. Flow kuye uketshezi uphethiloli cishe 10%. Lokhu igesi "iNsephe" intengo Izinsiza kusebenza ingaphansi ke, futhi kuyovuzwa isheshe. Nokho, uma yokufuna senziwa sesikhathi esizayo, i-methane inzuzo okuningi.
Methane noma propane
abashayeli abaningi ngokuvamile phambi refitting imoto yakho Angazi ukuthi ukukhetha. I ngebuhle nebubi futhi ekuqaleni futhi samuntu yesibili. Ukuze izimoto bezentengiselwano kufanele ucabangele leli phuzu eduze kakhudlwana.
Uma umshini isetshenziswa njalo olude kanye emzileni kungekho yokugcwalisa iziteshi, i-methane - akunjalo. Isisetshenziswa efakwe "iNsephe" ngu-methane has esinye isici - lokhu fuel ethangini ukwazi ukubona kancane. Ngokwesibonelo, e-cylinder kabani ivolumu 60 l, kufanelekile cc 15 kuphela. m igesi Umfutho.
Small siphela komunye ukugcwaliswa, futhi kungaphansi ezibuthakathaka CNG iziteshi kwenza kube hhayi okuhle kakhulu izimoto ezincane commercial isikhathi eside-ibanga ezokuthutha. Kungcono kuleli cala, ukuthenga uhlelo propane. Amagalaji ijwayeleke kakhulu, kanye nophethiloli kungatholakala ngisho emadolobheni amancane.
Kunezinganekwane eziningi ngokuphathelene HBO
Negesi imishini kwi "iNsephe" ukubeka ababaningi. Kungani? Ngenxa yokwesaba. Kunezinsumansumane oluthile mayelana nophethiloli. Ukubhubhisa kahle lezi zinkolelo kuyoba isibonelo propane, kodwa i-methane - konke okufanayo.
Le gesi engase aqhume
Kuyinto inganekwane ezivamile, kulo unomuzwa wokuphuthuma kudinga ukuphikisa. Ngaphandle kokuya imininingwane, Ukhuphula izinkungu uphethiloli ethangini ngemoto kufanele qhumisa ngisho ngokushesha kunokuba igesi isilinda. Ibhaluni yakhelwe futhi akhiwe ukuze ingcindezi 16 atm. Uhlonze lwalo metal kakhulu mkhulu kunezinhliziyo odongeni fuel ithangi, kanye metal okuhlala isikhathi eside kakhulu. Ngo ingozi ingozi yokubhubhisa esitsheni lincane kakhulu.
Ukuvuza kuba nokuphepha Isivalo esikhethekile okuzokwenza ukuvimba igesi okukhipha okungagunyaziwe. Uma kwakuba khona umlilo noma ibhaluni nje ebilayo, khona-ke linanomgudu ukukhulula ingcindezi ngokweqile. Waxwayisa ukuqhuma. Ngisho noma avuzayo elincane elikhona, ukwakha ingxube alufakwa, udinga isikhathi esiningi.
HBOT kunciphisa nezindleko ngesigamu
Lokhu kungase kube yiqiniso uma uhlelo likaphethiloli is modulations kuvumelekile. Kuzo zonke ezinye izimo, ukonga ezinjalo ngeke. Intengo propane ushibhile kabili kuka uphethiloli, kodwa ukusetshenziswa kwalo ngenhla. Izinga incike ngohlobo lomshini kanye ukumisa yayo.
Ukubeka up - lena inqubo ezinzima futhi kancane. Ngakho-ke, ukuze usethe imishini igesi "iNsephe" uye wazuzisa, kufanele ngokushesha funa inkonzo izinga. Kuzoba lula kakhulu kulabo abe imboni imoto iza HBO. Umuntu onekhono lokwenza ukhetho - ukufakwa kanye ukucushwa kwe imishini at dealerships. Kukhona-ke ngeke kwenziwe ongoti.
Negesi - ngabampofu
Eqinisweni, ungahambi abampofu igesi, kanye yezabantu, okuyinto Kuyinto edabukisayo ukukhokha imali ethe xaxa. I emikhulu umshini, ayanda ukusetshenziswa yakhe, kulapho-ke ulungisiswa. imishini yesimanje ongasebenza hhayi kuphela ukuthi "iNsephe", kodwa futhi ku izinjini ezinkulu futhi sína izimoto ezibizayo.
Ingabe Ningethuki. Uma ukufakwa imishini igesi "iNsephe" owenziwa ochwepheshe ke sina uhlelo ukulungisa akudingi iminyaka eminingi. Njengoba for the service, service kuyadingeka hhayi ningi than ejwayelekile fuel yesifunda.
Encishisiwe amandla injini
It ngempela. Izici kusukela igesi nophethiloli zihlukile. Kodwa izilinganiso zezitsha, lo mehluko incane -% 8-15 kuphela. Ekusebenteni, commercial umshayeli weloli abazange bakuqaphele. On amandla ne torque kulungiselelwa mathonya. ochwepheshe bazokwazi ukwenza ukwehla cishe imperceptible ekusebenzeni esinamandla.
Negesi injini efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Kwamanye izinjini kunjalo ngempela. Kusukela ngaleso sikhathi sika omlilo of igesi mkhulu ke valve qeda uhlangabezana imithwalo ephakeme. Lokho kungukuthi wokushiswa, le nokusulwa kufanele ziqashwe. omunye namanje caveat encane - valve hhayi selehlile. Ukuze wenze lokhu, imishini ephelele wuhlelo Lubrication echibini. Nakuba "iNsephe" asihlobene.
Naphezu kwazo zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, nokunye. Le gesi awuhlanzi off uwoyela, octane ngenhla, azikho ukungcola ukuthi kunganciphisa isisetshenziswa amayunithi yenjini.
Phakathi amamodeli ethandwa kakhulu namuhla ukuhlukanisa phakathi kohlelo lesine futhi lesibili isizukulwane HBO. Isizukulwane sesithathu - uyisibonelo zesikhashana, futhi kuyaqabukela asetshenziswa. Isizukulwane sesibili iyithuluzi elingeyona inkimbinkimbi.
Negesi imishini imoto "iNsephe" oyisizukulwane sesine eliphezulu futhi ngempumelelo. Yonke imisebenzi kanye nokusebenza zilawulwa ngemishini. Lapha iphindwa ngokuphelele umsebenzi multipoint uhlelo umjovo.
Le gesi agcinwe isilinda. Ewuketshezi, lingena le reducer-evaporator ngaphansi umugqa ekhethekile. Elementi heats futhi iyasha igesi igcina umfutho ngesikhathi zonke izindlela wokusebenza.
I-fuel vaporized ufinyelela emihle yokuhlanza zokuhlunga. Khona-ke umugqa ihlinzekwa ukuba umlomo wombhobho, okuyinto ku isiginali kusuka kukhompyutha lizovuleka. Ngaphezu kwalokho, nophethiloli yanikezwa sprayers.
Ukulungisa of imishini igesi (ku "iNsephe" 3302), ukugcinwa
yesondlo Esifike Ngesikhathi kuzoqinisekisa nokwethenjelwa esiphezulu futhi ihlala isikhathi eside. Nge yesondlo ofanele imishini igesi ukulungisa (ngesikhathi "Ibhizinisi Izinsephe" ngokukhethekile) kungase kungadingeki kunanini ngaphambili. Inkinga eyinhloko, okuholela ezibangela ukubhalelwa kuziphendulela ngefanelo, - aphansi kakhulu izinga nophethiloli. Uma uhlelo namanje awahlelanga, akudingekile ukuba bayilungise ngokwakho - ke kungcono ukuthembela ochwepheshe.
Service kuhlanganisa ukulawula uphethwe iyunithi, esikhundleni izihlungi, isheke valve, ingashiswa Imibhobho esemzimbeni, imigqa kufuneka uveze ukukhungatheka, futhi uhlelo ukuvuza. HBO ngoba "iNsephe" - isixazululo engabizi evumela amabhizinisi ukuze uthole. Ukuze iphelela emikhulu kuyisizathu isinqumo esifanele.
Ihhotela Louis Kerkyra Igalofu 4 * - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa